Piping Server: chinja data pakati pechero chishandiso | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe uine chaunoda kuendesa mafaera zviri nyore uye zvakachengeteka pakati pemidziyo, iwe unofanirwa kuziva pombi server, nzira iri nyore kubva pamutsetse wekuraira uye kuburikidza newebhu browser. Uye zvakare, iwe hauzove neganhuriro, senge mamwe masevhisi atovepo. Izvi zvinogona kukusevha yakawanda yekunetsekana, sekushandisa ekunze ekuchengetedza madhiraivha uye mamwe maitiro ...
Piping Server zvakare iri zvachose mahara webhu saiti. Nayo unogona kushandisa zvibvumirano zveHTTP / HTTPS kuendesa pakati pechero mudziyo, zvisinei nesystem kana Hardware yayo. Semuenzaniso, unogona kushandisa curl kutumira data kana kushandisa webhu interface (nechero webhusaiti yazvino webhu), uye pasina kunyoresa.
Piping Server inoendesa iyo data zvakachengeteka, sezvandataura. Uye ndokutenda kuna kuguma-kumagumo kunyorera. Uye kana iwe uine hanya nezve zvakavanzika, usazvidya moyo, nekuti hazvichengete dhata mune chero nzvimbo yepakati kana mune yeruzhinji gore. Muchidimbu, Peer-to-Peer (P2P) nzira yekufambisa kubva kune imwe kifaa ichienda pane imwe
Saizvozvo, Piping Server inobvumidza kutumira faira kubva kuchinhu kamwe chete, uye izvo inogona kugamuchirwa nemhando dzakasiyana siyana. Pasina kudzokorora maitiro acho kakawanda, izvo zvinoita kuti kuendesa kuve nyore uye nekukurumidza.
Inogona kubatsira zvakanyanya kana migrate kubva kune mumwe muchina uchienda pane mumwe, uchipfuura zvese zvaunoda kumuchina mutsva, kana kana iwe uchida kuve nemafaira pane chimwe chishandiso, senge laptop, nharembozha, nezvimwe. Izvo zvinoshandiswa zvakawandisa, sezvaunogona kufungidzira.
Kana iwe uchizoishandisa kubva kune iyo terminal ne curl, mirairo iri nyore kwazvo. Unogona kuvaona pano:
Uye yeuka kuti iwe unogona zvakare kurodha pasi kubva pawebhu browser, iwe unongofanirwa kuteedzera iyo yekurodha URL uye nekuinamatira mubrowser yako yaunofarira ... Unogona zvakare kushandisa zvakananga aya maratidziro ewebhu pombi server y Piping UI. Sezvauri kuona, zviri nyore kupusa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Piping Server: chinja data pakati pechero mudziyo
Hapana chandinoona akadaro
Zvakanaka, sezvauri kuona, ini handioni chero chinhu nekuti iwe hautsanangure chero chinhu, saka ...